အိန္ဒိယမှ ပိတ်ထားသည့်ပဲတင်ပို့မှုကိစ္စ အလားအလာကောင်းများ ရှိနေပြီး ယင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲ?? - Yangon Media Group
အိန္ဒိယမှပိတ်ထားသည့်ပဲတင်ပို့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလားအလာကောင်းများရှိနေပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်း မြင့်က ပြောသည်။ မတ် ၁၅ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၏ (၂၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ယင်းသို့တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသန်းမြင့်က”အိန္ဒိယကပဲတင်သွင်းခွင့်ပြုဖို့ရှိပါတယ်။ အလားအလာကောင်းတယ်။ သို့သော်လည်းအိန္ဒိယမှာ ရွေးကောက်ပွဲရှိ တဲ့အတွက်ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းမှာဖြစ် ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ပြည်ပပဲတင်သွင်း ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် မြန်မာ့ပဲကုန်သည်များ၊ တောင်သူ များအခက်တွေ့ခဲ့ရပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ပဲတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထား ခြင်းကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ပဲ တင်ပို့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံ တရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ရရှိရေးအတွက် အစိုးရ ချင်းနားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုး နိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဒေါက်တာသန်းမြင့်က”ကျွန် တော်တို့ဈေးကွက်မှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ်လစီအပြောင်း အလဲအခြေအနေတွေ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့် ဈေးကွက်ကိုထိခိုက်တာရှိပါတယ်။ နစ်နာမှုတွေရှိပါတယ်။ ဒါကိုကျွန် တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့သတိထား ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့လည်းတတ်နိုင်သမျှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတာရှိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှစတင်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ၎င်းတို့ဆိပ်ကမ်းရောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို အကောက်ခွန်ရှင်းလင်း ခြင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့်အကျိုးဆက်ကြောင့် ပဲပုံမှန်ဝယ်ယူနေသည့် အိန္ဒိယဝယ်လက်များမှာပဲ ဝယ်ယူမှုရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း ပြည်တွင်းတွင် မတ်ပဲစိုက်ပျိုးမှုနည်း ပါးခဲ့ခြင်းကြောင့် ကုန်ကြမ်းလက် ကျန်နည်းပါးပြီး ဈေးနှုန်းမြင့် တက်လာကြောင်း သိရသည်။
ပခုက္ကူပဲကုန်သည် ဦးဇော်မျိုးထက်က”အိန္ဒိယကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအိန္ဒိယအစိုးရက သူ့ပြည်တွင်းမှာ ပဲတွေအထွက်နှုန်းများလာတယ်ဆိုပြီး သူ့ပြည်တွင်းထဲသွင်းလာတဲ့ပဲတွေအပေါ် ကန့်သတ်ချက် တွေထုတ်တယ်။ ပြီးတော့အဝယ် ပြန်ရှိလာတယ်။ အခုနှစ်စပိုင်းမှာ ပြန်ပြီး အဝယ်ရပ်သွားပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကိုယုံကြည်လိုက် လို့မရဘူး။ ကြိုပြင်ဆင်ထားမှုတွေလုပ်ထားရမယ်”ဟုပြောသည်။ မတ်ပဲ၊ပဲစင်းငုံများသည်ပြည် တွင်းစားသုံးမှုအလွန်နည်းပါးပြီး ထွက်ရှိသော ပဲများ၏ ၈ဝ ရာခိုင် နှုန်းကျော်ကို အိန္ဒိယသို့တင်ပို့ ရောင်းချနေရကြောင်း သိရသည်။
လူသတ်မှုကြောင့် အပြစ်ချမှတ်သည့်အပေါ် ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် မမျှတဟုဆိုကာ မိသားစုများက မကွေးခရိုင် တ??
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းချဉ်းကပ်လာသည့်အတွက်ကျောင်းနှင့် ဈေးများကိုပိတ်သိမ်းကြောင်း ထိုင်ဝမ် အမိန့်ထုတ်
အမရပူရသင်္ချိုင်းထဲတွင် ရိုက်သတ်ခံထားရသည့်အမျိုးသား နှစ်ဦး၏အလောင်းတွေ့ရှိ